Internet Ministries - Chechi yaKristu
"Nokuti ini ndinoziva zvirongwa zvandinazvo pamusoro penyu," anodaro Ishe.
Jeremiah 29: 11 Read More
Kukohwa ichokwadi chaizvo Ita anokurudzirwa nokuti Ishe ari kukudana iwe muushumiri Hwake.
Teerera kune imwe yemharidzo dzedu
Dzidza Bhaibheri kuburikidza neBhaibheri reChishanu Courses
Chii chandinofanira kuita kuti ndiponeswe?
The machechi aKristu
Ndivanaani machechi aKristu uye vanotenda chii?
Isu hatina masangano uye hatina hukuru hukuru kana mutungamiri wenyika. Musoro wekereke haisi mumwe kunze kwaJesu Kristu (VaEfeso 1: 22-23).
Ungano imwe neimwe yekereke yaKristu inodzivirira, uye iShoko raMwari rinotibatanidza muTenda Rumwe (VaEfeso 4: 3-6). Isu tinotevera dzidziso dzaJesu Kristu nevaApostora vake vatsvene, uye kwete dzidziso dzevanhu. Isu tiri vaKristu chete!
A Mharidzo YeTariro uye Yekurudzira
Uri kutarisa nokuda kwechitsva kereke yemhuri kudzidza uye kunamata pamwe chete? Tinoda kuda kuziva zvakawanda pamusoro pako nemhuri yako. Makereke aKristu anokugamuchira iwe.
Kutsvaga our latest mharidzo? Teerera kana kutora ikopi nhasi. Famba kwedu mharidzo kuti inzwe kubva kune vaparidzi vanoverengeka munyika yose.
isu Join ino Svondo kunamata! Tine zviuru zveungano pasi pose nekuda kwako. Enda kunzvimbo dzedu dzepaIndaneti kuti uwane kereke pedyo newe.
dzidza NezveKereke Yedu
Tinotaura apo Bhaibheri rinotaura, uye isu tinonyarara apo Bhaibheri rinyerere. Isu hatina masangano uye hatina hukuru hukuru kana mutungamiri wenyika.
Verenga Zvakawanda Pamusoro pezvo makereke aKristu
Musoro wekereke haisi mumwe kunze kwaJesu Kristu pachake (VaEfeso 1: 22-23).
patinoshanyira isu Munyengetero: Panguva yekunamatira basa vazhinji vevarume vanotungamirira ungano muminyengetero yevanhu vose.
We kunamata Mwari mumweya uye muchokwadi
Kuimba: Tichaimba nziyo dzinoverengeka nenziyo pamwechete, kutungamirirwa nevevatungamiri vese kana vazhinji. Izvo zvichave zvichinyorwa capella (pasina kubatana kwezviridzwa zvemimhanzi).
Kudya kwaShe Kwemanheru: Tinodya chingwa chaShe cheSvondo rese neSvondo, tichichitevera muenzaniso wekereke yekutanga remakore.
Zvine zvitsuwa zve 7,000 uye huwandu hwevanhu vane mamiriyoni e104, Philippines ndiyo nyika huru uye nzira inopinda kuAsia.
Tsvaga Sei Kuti Ubatane
Vakawanda vePhilippines vanoshanda muChina, dzimwe nyika dzeAsia, uye kunyange kumativi ekumaodzanyemba, uko vane nzvimbo dzakasimba. Basa rinokosha uye nguva yeSair Player.
Chechi yaShe yave iri muPhilippines kwemakore akawanda nekuda kwezvaiitwa uye zvekare zvekuita basa. Nhasi pane inofungidzirwa neChnumx ungano.
Machechi aKristu anokugamuchirai kuti munamate Ishe nesu. Tiri pano kuzoshumira Mwari uye kukubatsira mukufamba kwako naIshe. Shanyira kereke yaKristu munharaunda yako. Iko nguva dzose kufara kushumira mhuri yaMwari. Kana tikasati tine basa chero ripi zvaro kwamuri tapota usazeza kudana kana kunyora.
Dzidza Zvakawanda Pamusoro Pedu
Verenga Blog Yedu
"Chechi yaKristu ndiyo chaizvo izvo ini nemhuri yangu taitsvaga uye taida. Tiri kuvonga kuInternet Ministries nekugovera vhangeri raKristu nesu. Mwari akanaka! "
Silbano Garcia, II. Muevhangeri
Silbano Garcia, II. anoshumira semuevhangeri kumachechi aKristu, uye ndiye muvambi weInternational Ministries. Hama Garcia vakaita basa roumishinari mumatunhu eCalifornia, Colorado, Florida, Idaho, Iowa, New York, uye Texas. Akaparidzirawo mumisangano yevhangeri kumativi ose enyika. Musi waMay 1, 1995 akashanda pakuendesa yeIndaneti Gateway yekutanga yekereke dzaKristu pasi rose pawww.church-of-Christ.org. Iyi shumiro yepaIndaneti inoramba ichishanda senhare paInternet yemachechi aKristu pasi rose.
Hama Garcia vanozivikanwa seEvangelist yeInternet uye mapiyona mumunda weEvangelism yeInternet. Akashanda mukubatsira mazana eungano mukushandisa Indaneti semotokari yekupararira kweEvhangeri yaJesu Kristu. Maitiro ake ari paIndaneti ave akacherechedzwa nemapoka makuru ezvitendero kusanganisira nyika yepasi.
Dzidza Zvimwe NezveInternet Ministries